နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စေဖို ဟာသ လေးတွေပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စေဖို ဟာသ လေးတွေပါ…
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စေဖို ဟာသ လေးတွေပါ…
“ရှင်ဘာလုပ်နေတာလဲ” ဟု မိန်းမကမေးသောအခါ
“တော်တော်များများ သတ်လိုက်ပြီလား” ဟုမိန်းမက ဆက်မေးသည်။
“အေး၊ အမ၂ကောင်၊ အထီး၃ကောင် ဆော်ထည့်လိုက်ပြီ” ဟုယောကျာင်္းကပြောရာ
“ရှင်က ယင်ကောင်ကိုအထီး အမ ဘယ်လိုသိသလဲ “ဟုမိန်းမက ပြန်မေးလေ၏ ။
ထိုအခါ ယောကျာင်္းက “သိတာပေါ့ဟ၊ ဘီယာဗူးပေါ်က ၃ကောင်ကအထီး၊ ဖုန်းပေါ်မှာ ကြာကြာနားနေတဲ့ ၂ကောင်က အမပေါ့” ဟုအဖြေပေးလေသည်။
တစ်နေ့ မှာဆရာကကိစ္စရှိလို့ -” တပည့်ရေ၊ ဆရာအပြင်သွားအုံးမယ် ထမင်းချက်ထားကွာ” လို့ မှာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာအပြင်ကပြန်လာပြီး” တပည့်ရေ၊ ထမင်းစားကြရအောင်ခူးကွာ” လို့ ပြောလိုက်တော့၊ တပည့်ကလည်းခူးပြီးတာနဲ့ ဆရာက ” ဟင်းကောကွာ” လို့မေးတယ်။
ထိုအခါတပည့်က” ဆရာကထမင်းပဲချက်ထားလို့ မှာတာကို” ဟုပြန်ဖြေတယ်။
ဆရာက အားမလိုအားမရနဲ့ ” တပည့်ရာရိုးပါ့၊ ဆရာက ‘တစ်’ ဆိုရင်၊ တပည့်က ‘နှစ်’ ‘သုံး’ အထိစီစဉ်ထားရတယ်ကွ၊မှတ်ထားသိလား လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ မှာတော့ ဆရာဖျားနေလို့ တပည့်ကို” ဆေးဆရာသွားပင့်ခဲ့ကွာ” ပြောတော့၊ တပည့်လည်းအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ အိမ်ကထွက်သွားတယ်။
ခဏကြာတပည့်ပြန်လာပြီး ဆရာက-“တပည့်ရေ၊ ဆေးဆရာပင့်ခဲ့ပြီလား” လို့ မေးတော့၊
တပည့်ဖြေလိုက်ပုံမှာ-” ဆရာကျွန်တော့်ကိုသွန်သင်တဲ့အတိုင်း၊ ဆေးဆရာလည်းပင့်ပြီ၊
ဖခင်။ ။ နေအုံး သား… ကောင်မလေး က ဘီလ်ဂိတ် သမီးကွ။
သား။ ။ အော် ဒီလိုလား… အဖေ့ စကားနားထောင်လိုက်ပါမယ်။
ထို့နောက် ဖခင် သည် ဘီလ်ဂိတ် ထံသို့သွား ပြီး….
ဖခင်။ ။ နေအုံး… ဟိုကောင်လေး က ကမ္ဘာ့ဘဏ် လက်ထောက် ဥက္ကဌ ဗျ။
ဖခင်။ ။ ဥက္ကဌ ကြီးခင်ဗျား… လစ်လပ်နေတဲ့ လက်ထောက်ဥက္ကဌ ရာထူးအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ သူငယ်လေးတစ်ယောက် တွေ့ထားပါတယ်။
ဥက္ကဌ။ ။ ဒီလိုလား… ရပါတယ်။
ဟေ့…..နံပါတ်(၅) ပြောပြကြည့်“
အသံလေးချိုချိုသာသာနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး““ ဟေ့ …ပြောပြလေဟာ နင်ကလဲ
““ မောင်………….””လို့ခေါ်လိုက်တယ် ကောင်လေးကပြုံးပြီး တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်
““ မောင်…..ပြောပြပါနော် ……မောင်နော် ””
““ ဟဲဟဲ …..မောင်လည်းမင်းလိုပါပဲကွာ အဲတစ်ပုဒ်ကိုမရဘူး ””
” မေမေမျှင်ရှိလား “
” ရေချိုးနေတယ်၊ ဈေးဝယ်မလို့ဆို ငါရောင်းတတ်ပါတယ် “
” မေမေမျှင်မှသိမှာ “
” ငါလဲ တစ်ဆိုင်လုံးသိပါတယ် ကဲ ပြောဘာဝယ်မလဲ “
” အတွင်းပစ္စည်းဝယ်ချင်လို့ “
” ကတွတ်ပီ တော်မသိဘူး၊ လစဉ်သုံးပစ္စည်း၊ အတွင်းပစ္စည်းတို့ဆိုတာ ကျုပ်မှသိတာ “
ထိုစဉ် သမီးဖြစ်သူ ငိုယိုပြီး ဖခင်ဖြစ်သူအားတိုင်လေသည် ” အဖေ သမီးကို
ဖခင်။ ။ “# # ^ ^ % % သား ဒီကောင် သူများသားသမီးကိုလည်းယူုသေးတယ်
သူနားက တဖ၀ါးမှမခွာလို့ ချစ်တက်လိုက်တာလို့ ထင်ထားတဲ့ မမိန်းမ…..
ထွက်တက်လာတယ်… သွားခါနီးရင်လဲ ကဲ ကို အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်
မမိန်းမက ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်လို့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့ … ကိုဒသဂီရိက KTV ,
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကနေ နှစ်ယောက် … နှစ်ယောက်ရလားတော့
သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးနှစ်ယောက်အမေရေ…..ဆိုပြီး လစ်တယ်လေ မမိန်းမက
ပြုံးတာကလဲ ပညာပါလာပြီဗျ …….
ငါးသလဲထိုး ငါးမြွေထိုးပြုံးလေးတွေ ပေါ့ …..
မိန်းမနား ကပ်သေးတယ် …လေးလလဲ
ပြည့်ရော ထုံးစံအတိုင်း သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးသုံးယောက်အမေရေ…..ဆိုပြီး
Here are some sayings from School….